War Deg Deg Ah Roobow oo ka degay Baydhabo – idalenews.com
War Deg Deg Ah Roobow oo ka degay Baydhabo
Magaalada Baydhabo oo xarunta KMG u ah Maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka degtay Diyaarad gaar ah oo siday Wafdi uu hoggaaminayo Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Garoonka Diyaaradaha Shaati Guduud ee Duleedka Magaalada Baydhabo, waxaa ku soo dhaweeyay wafdiga Roobow Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka, kan degmada, Saraakiil Ciidan, qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xubno kale.
Roobow oo ka tagay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa Masuuliyiin uu ku jiro Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo socdaalo ku kala bixinaya qeybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha Hoose.
Sheekh Muqtaar Roobow ayaan si rasmi ah loo ogeyn ujeedka socdaalkiisa, waxaana horay u sii raacay Saraakiil ka tirsan Ciidamada Koonfur Galbeed oo Muqdisho ku sugnaa.
Amniga guud ee Magaalada Baydhabo gaar ahaan Garoonka Diyaaradaha ayaa aad loo adkeeyay, waxaana amnigiisa sugaya Ciidamo gaar ah oo uu watay Wadaadka.
Roobow ayaa loo galbiyay Xarunta Madaxtooyada Magaalada Baydhabo halkaas oo la filayo inuu kulamo gaar gaar ah kula yeesho Madaxda Maamulka, Saraakiisha Ciidamada, wuxuuna kala hadlayaa qorshaha uu u tagay Baydhabo.
Dhageyso:-Maamulka Jubbaland oo Xabsiga u taxaabay xildhibaan Axmed Taajir Sababta